I-TikTok ye-iOS ihlaziyiwe ukuvumela ukuba ucime izimvo kwiividiyo zakho | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | IPhone iindaba
I-Twitter ibisoloko ibonakaliswa njengendlwane yeetrolls, kuba kulula kakhulu ukufihla emva kwesidlaliso kunye nokuqala ukugxeka, ukuphawula, ukuthuka ngaphandle kwesiphumo ngaphaya kwalawo anokunyulwa liqonga. I-TikTok lelinye iqonga elifanelekileyo lolu hlobo lomntu.
Ingxaki ngeTikTok kukuba isicelo ijolise kubaphulaphuli abakwishumi elivisayo Kwaye ezinye izimvo zinokuba neziphumo ezibi zempilo kubenzi bemxholo. Ukuthintela oku, iqonga lifake isixhobo esitsha sokulwa ukuxhaphaza kweli qonga.
Esi sixhobo sitsha sikuvumela ukuba ucime izimvo ezininzi kunye kwiividiyo zabenzi bemxholo kwaye wazise neqonga lokuba ezi akhawunti Baphula imithetho yeqonga.
Namhlanje sisungula indlela entsha yokuba abadali balawule ngokulula unxibelelwano kunye nomxholo wabo. Abantu babeka iintliziyo zabo nemiphefumlo yabo ekwenziweni nasekuzonwabiseni kwiTikTok, kwaye siyayiqonda indlela ekunokuba nzima ngayo ukufumana izimvo ezingathandekiyo kwiividiyo.
Ngaphambili, iTikTok yongeze into evumela umdali ukuba ahluze ukuba zeziphi izimvo abazifunayo ukuvela kwizithuba zakho. Ukongeza, iqonga limema abasebenzisi abafuna ukuthumela amagqabantshintshi, ukuba baphinde baqwalasele upapasho lwabo ukuba lunokucaphukisa.
Olu khetho lulungile, kodwa kwiimeko ezininzi ezi troll zinako yenza iiakhawunti ezintsha ngaphandle kwengxaki, ke ingxaki ayisombululeki ncam kodwa iyalibaziseka, kodwa kuyacaca, iya kuhlala ingcono kunokuba ungasunguli nayiphi na indlela yokuzama ukunciphisa uxinzelelo oluhlukunyezwa ngabanye abasebenzisi.
Ungazicima njani izimvo kwiTikTok
Ukucima izimvo kwividiyo, kuya kufuneka ucinezele kwaye ubambe amagqabantshintshi ukubonisa ujongano lokuhlela okanye Cofa kwipensela ebekwe kwikona ephezulu ngasekhohlo ukufikelela kukhetho.
Abasebenzisi banokucima ukuya kuthi ga kwizimvo ezili-100 zizonke endaweni yokuya nganye nganye. Lo msebenzi iyafumaneka ngoku eSpain, EUnited Kingdom, eMzantsi Korea, eUnited Arab Emirates, eVietnam naseThailand. Kwiiveki ezizayo lo msebenzi uza kufikelela kwamanye amazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » I-TikTok ye-iOS ihlaziyiwe ukuvumela ukuba ucime izimvo kwiividiyo zakho
I-Fortnite ivelise ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi ze-Apple ngelixa yayikwiVenkile yeApple
I-Apple TV entsha ikuvumela ukuba uvelise kwakhona sonke isandi sikamabonwakude kwiiPodPods zasekhaya